China ICE Maindasitiri Reverse Osmosis Sisitimu yeKutonhora Shongwe Yemvura Sisitimu Mugadziri uye Mutengesi Yubing
Yakavharwa Circuit Inotonhorera - Counter-kuyerera
Yakavharwa Loop Kutonhora Towers - Kuyambuka-kuyerera
Yakatemerwa Dhaidhi yekutonhodza Towers - Rectangular Rudzi
Yakagadziriswa Dhaidhi yekutonhodza Towers - Round-bhodhoro Rudzi
Maindasitiri Ekutonhodza Towers ePower Generation
RO Kurapa Kwemvura
Yakakwira-inoshanda Evaporative ...
ICE Maindasitiri Reverse Osmosis Sisitimu yeKutonhora Shongwe Yemvura Sisitimu
Reverse Osmosis / RO ndiyo tekinoroji inoshandiswa kubvisa zvakasungwa zvakasviba uye tsvina kubva mumvura ichishandisa semi-inokwenenzverwa RO membrane iyo inobvumidza kupfuura kwemvura asi ichisiya ruzhinji rwezvakatsakatika zvakasimba uye nezvimwe zvinosvibisa kumashure. Iyo Ro membranes inoda kuti mvura ive pasi pe yakanyanya kumanikidza (yakakura kupfuura osmotic kumanikidza) kuti uite izvi
Chii chinonzi Reverse Osmosis?
Mvura inopfuura nemu RO membrane inonzi "peyuta" uye munyu wakanyungudutswa unorambwa neiyo RO membrane inonzi "concentrate". Iyo inomhanya nemazvo RO system inogona kubvisa inosvika 99.5% yeinouya inonyungudutswa munyu uye tsvina.
Maindasitiri Reverse Osmosis RO Kurapa Kwemvura Maitiro
Maindasitiri anodzosera osmosis chirimwa chinosanganisira multimedia pre-firita, inonaya mvura kana anti-scalants dosing system, de-chlorination dosing system, reverse osmosis unit ine semi-inokwanisika membranes, uye UV sterilizer kana post chlorination seye post kurapwa. Iyi michina yeRO inoshandisa tekinoroji yekudzosera osmosis nekutakura mvura yekudya kuburikidza ne multimedia pre-firita kubvisa zvidimbu zvakakura kupfuura gumi-micron. Ipapo mvura inobaiwa jekiseni neanti-scalants kemikari kudzora kuomesa fouling iyo inogona kukonzera kukuvara kune membrane yemuchina we RO. Idzi sarudzo dzekufanotangisa dzine kugona kubvisa kuomarara, chlorine, hwema, ruvara, simbi, uye nesarufa. Mvura inozoenderera ichipinda muchikamu che reverse osmosis apo pombi yepamusoro-pombi inoisa kumanikidza kwakanyanya kumhinduro yakanyatsogadziriswa, ichipatsanura munyu wakasara, zvicherwa, uye marara izvo pre-firita isingakwanise kubata. Mvura nyowani, inonwa mvura inobuda kubva kune yakaderera-kumanikidza kumagumo kweiyo membrane nepo munyu, zvicherwa, uye nezvimwe zvisvinu zvaburitswa kupinda murasvu kune rimwe divi. Chekupedzisira, mvura inopfuudzwa kuburikidza neiyo UV sterilizer (kana post chlorination) kuuraya chero mabhakitiriya uye hutachiona huripo mumvura.
Maindasitiri Reverse Osmosis Sisitimu Yekutenga Yekutungamira
Kuti usarudze yakakodzera RO chigadzirwa, inotevera ruzivo runofanirwa kupihwa:
1 kuyerera mwero (GPD, m3 / zuva, nezvimwewo)
2.Feed mvura TDS uye ongororo yemvura: iyi ruzivo yakakosha kudzivirira membranes kubva pakushatisa, pamwe nekutibatsira isu kusarudza chaiyo pre-kurapwa.
3.Iron uye manganese inofanirwa kubviswa mvura isati yapinda reverse osmosis unit
4.TSS inofanirwa kubviswa usati wapinda muiyo Industrial RO system
5.SDI inofanira kunge iri pasi pe3
6.Mvura inofanira kunge isina mafuta uye mafuta
7.Chlorine inofanira kubviswa
8.Magetsi anowanikwa, chikamu, uye kuwanda (208, 460, 380, 415V)
9.Dimensions yenzvimbo inofungidzirwa uko iyo Industrial RO Sisitimu ichaiswa
Pashure: ICE Yakakwira Kushanda Kwejecha Kuchenesa Sisitimu Yekutonhora Towers 'Kutenderera Kwemvura Kurapa
Zvadaro: ICE Maindasitiri Emvura Softener Sisitimu Yekutonhora Shongwe Kunobva Mvura
Maindasitiri Reverse Osmosis Midziyo
Industrial RO mvura firita
maindasitiri RO mvura yekuchenesa system
Maindasitiri RO ekurapa mvura system
Maindasitiri ekurapa mvura RO michina
Ro maitiro ekutonhora shongwe yemvura system
Ro mvura yekuchenesa yekutonhora shongwe
Ro kurapwa kwemvura kwekutonhora maitiro
Counter-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Towers / Ev ...
Yakagadziriswa Dhizaini Yemuchinjikwa-kuyerera Towers yeMagetsi Gener ...
Round Bhodhoro Type Counter-kuyerera Kutonhora Towers
Ice MBR Membrane Module yeindasitiri Wastewate ...
ICE Yakakwira Kubudirira Sand Sand Kuchenesa Sisitimu ye ...
Kuyambuka-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Towers / Evap ...
ICE YAKAKONZESA TOWER SYSTEM
Seyako maindasitiri kutonhodza michina uye inoenderana inosangana yekurapa mvura mhinduro mudiwa, isu tinonzwisisa kuti inoteerera uye yakavimbika mushure-yekutengesa masevhisi yakakosha kwauri, isu tichashanda pamwe newe muhupenyu hwakazara hupenyu hwechirimwa chako nemidziyo yekuona isingaperi bhizinesi. kubudirira.
Chikamu 392, No. 698, Lane 1588, Zhuguang Road, Shanghai, China
Kana iwe uine chero mibvunzo, ita shuwa yekusiya mameseji kuti uwane rumwe ruzivo nezve kutonhora shongwe system uye mhinduro dzemvura yekurapa.